इटहरीमारहेकाे कचना ग्रामथानमा थारुहरुलाई पुजा गर्न राेक मन्दिरमा ताला । थारु पाेर्टल -
इटहरीमारहेकाे कचना ग्रामथानमा थारुहरुलाई पुजा गर्न राेक मन्दिरमा ताला । थारु पाेर्टल
सुनसरीकाे इटहरीमा रहेकाे थारुकाे कचना ग्रामथानमा बर्षमा एकपटक बैशाख ३ गते पनि थारु समुदायलाई पुजाअर्चना गर्नबाट बञ्चित गराएको छ । प्रत्येक बर्ष थारु संस्कार अनुसार बिधिवत पुजाआजा गर्दै आएकोमा यस बर्ष समिति, वडा कार्यालय र प्रहरी प्रशासनले एकतर्फी रुपमा निर्णयगरी बिशेष दिनमै ग्रामथानमा तालाबन्दि गर्दै त्याहाका स्थानिय समुदायलाई पुजा गर्न राेलगाएकाे छ।
पुजाकालागी सुक्रवार तयार रहेका चौधरीटोलका थारु समुदाय यसबर्ष पुजागर्नबाट बञ्चितहुदा परम्परा र संस्कारनै हराउने चिन्ता भएको छ । बिहान देखी पुजा सुरु गर्नु पर्नेमा ग्रामथानमा ताला लगाई थारु समुदायलाई धार्मिक अनुष्ठान गर्ने संबैधानिक अधिकार हनन् भएको छ भने धर्मनिरपेक्ष्य मान्यतालाई कुन्ठित गर्ने प्रयास गरेको छ ।
कोरोनाको महामारी देखाएर ग्रामथानमा ताला बन्दी गर्दा परम्परागत संस्कारलाई मास्न खोजेको स्थानीय चौधरी टोलकी सुशिला लेखीले बताईन । ताला खोल्न धेरै प्रयास गर्दा पनि ५ः०० बजे बेलुका मात्रै ढोका खोल्न दिएर भाकल चढाएको लेखीले बताइन् । लेखीले आफु ग्रामथानको ताला खोल्न कार्यवाहक अध्यक्षलाई अनुरोध गर्दा समिति र वडाकार्यालयको निर्णय रहेको भन्दै साँचो दिन नमानेको लेखीले जानकारी दिईन् । यो सरासर संस्कारमाथी हमला भएको लेखीकाे धारणा रहेको छ ।
कचना मन्दिर समितिमा गैरथारुहरुको कब्जा रहेकोले थारु समुदायको मान्यतालाई बुझन नसकेको समितिको सदस्यमा रहेकी सुशिला चौधरीले जानकारी दिईन् । बैशाख ३ गते मन्दिर बन्दगर्ने समितिको निर्णयमा बिमति जनाए तथापी पनि कार्यवाहक अध्यक्षले एकल निर्णय गर्दै अगाडी बढ्दा आफु हस्ताक्षरनगरी बिरोध जनाएको चौधरीको भनाईरहेको छ ।
समयमा बिधिवत पुजागर्न नदिदा थारुले मान्दै आएको संस्कारमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएको उन्को भनाइ रहेको छ । समितिको अध्यक्षमा गणेश कार्की रहेको छ । कार्की बिदेश रहदा भने कार्यवाहक अध्यक्ष भट्टराई रहेको थियाे ।
इटहरी वडा नं. ४ मा रहेको धार्मिक मान्यता अनुसार कचना डिहवार(ग्रामथान) शक्तिशाली रहेको मानिन्छ । थारु समुदायले पुरानै कालखण्ड देखी स्थापना गरेको सो ग्रामथान हालमा आएर संकटमा परेको देखिन्छ । कचना ग्रामथानलाई गैरथारुहरुले समितिमाबसेर कब्जा गरेर मन्दिरमा परिवर्तनगरी अवशेषनै नामेट पारेको छ ।
प्रकृतिपुजक थारु समुदाय ग्रामथानमा मुर्ति नराखी मान्दै आएकोमा गैर थारुहरुले त्याहा शिवलिङ्ग, गणेश मुर्ति राख्न लगाएको छ । ग्रामथानको नाम परिवर्तन गरी मन्दिर, कचना महादेव नामाकरण गर्न दुसप्रयास समेत भएको छ । कचना ग्रामथाकै सांस्कृतिक भुमि क्षेत्रफल अनुसार १ बिगहामा रहेको थियो हालमा आएर अतिक्रमण र मिचाईको सिकारहुदै क्षेत्रफल धुरमा सिमित रहेको छ । त्याहाका सांस्कृतिक भुमि बिकासका नाममा खानेपानि, सैनिक ब्यारेक,वडाकार्यालय बसाएर थारु समुदायको आस्थावान ग्रामथाननै संकटमा रहेकाे छ ।
थारु भाषाकाे छाेटाे चलचित्र “जुडि सितल” भगत चौधरी र कारण सरदारले बि.आर.सी. स्टुडियो मार्फत सार्बजनिक।थारु पाेर्टल
थारु समुदायले महाराजी पुजा गर्ने ग्रामथानहरू एका एक मासिदै। थारु पाेर्टल